Warts ကြွက်နို့ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
(၁) ဆရာကူညီပြီး ပြောပြပေးပါ။ ကြွက်နို့ကို ဘယ်လိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်လို့ ရပါသလဲ။
(၂) ကျွန်တော် ရန်ကုန်ကပါ။ အသက် ၂၇ ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော် ခြေဖမိုးမှာ ကြွက်နို့တွေပေါက်နေပါတယ်ဆရာ။ ပေါက်တာတော့ ၅ နှစ်လောက် ရှိပါပြီ။ အစတုန်းက ခြေသန်းကြွယ်မှာ ၁လုံးပေါက်တာပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွားလာတာ အခုခြေဖမိုးမှာ ၁ဝ လုံးလောက်ဖြစ်လာပါပြီ။ ကြွက်နို့ကပ် ပလာစတာတွေကပ်တာတော့ မပျောက်ပါဘူးဆရာ။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမည်ကို သိလိုပါသည်ဆရာ။
ကြွက်နို့ဆိုတာ Human papilloma virus (HPV) ခေါ်တဲ့ (ဗိုင်းရပ်စ်) ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ဒီပိုးကလဲ အမျိုးပေါင်း ၁ဝဝ ကျော် ၂ဝဝ ရှိတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ကြွက်နို့ပေါက်တတ်ပါတယ်။ ကူးတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လိင်လမ်းကြောင်း (ပါးစပ်၊ မွေးလမ်းကြောင်း၊ စအို) တွေမှာ ဖြစ်တဲ့ ကြွက်နို့က ပိုပြီးကူးတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် အကာအကွယ်မဲ့ အတူနေတာကို ရှောင်ပါ။ တချို့မှာ အပြင်ကနေ မသိနိုင်တဲ့ ကြွက်နို့ရှိနေတတ်ပြီး သူများကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
တချို့ကြွက်နို့များက အလိုလိုပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပျောက်မှာဘဲဆိုပြီး စောင့်မနေဘဲ ကုဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ ကုသနည်းကလဲ ကြွက်နို့ပေါက်တဲ့နေရာ မတူရင် မတူပြန်ပါ။ ဆေးမြီးတိုနည်းတွေကို အားမပေးလိုပါ။ အလွယ်ဝယ်ရတဲ့ ဆေးတွေဆိုတာ အာမခံချက် မရှိပါ။ အသားတွေကို စားပစ်မယ့် အက်စစ်ဓာတ် အဆများလွန်းတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မျက်နှာနဲ့ လိင်လမ်းကြောင်းမှာ ပေါက်တာမျိုးဆိုရင် ပိုဆိုးသွားပါလိမ့်မယ်။
အရေပြားအထူကုဆရာဝန်တွေက အကောင်ဆုံးကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ မြင်တာနဲ့ ရောဂါကိုသိတယ်။ လိုအပ်ရင် Biopsy အသားစဖြတ်ပြီး စစ်ဆေးမယ်။ ကြွက်နို့တွေက ဆေးမကုဘဲလဲ ပျောက်နိုင်တာရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေမှာ ဖြစ်ရင်။ လိင်လမ်းကြောင်းမှာမဟုတ်ရင် ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
Dermatologist အရေပြားအထူကုဆရာဝန်တွေက အကောင်ဆုံးကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ မြင်တာနဲ့ ရောဂါကိုသိတယ်။ လိုအပ်ရင် Biopsy အသယးစဖြတ်ပြီး စစ်ဆေးမယ်။ ကြွက်နို့တွေက ဆေးမကုဘဲလဲ ပျောက်နိုင်တာရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေမှာဖြစ်ရင်။ လိင်လမ်းကြောင်းမှာ မဟုတ်ရင် ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
1. Cantharidin ဆေးလိမ်းပေးနည်း။ အပူဖူးလေးထွက်မယ်။ တပါတ်နေရင် သေသွားတဲ့ကြွက်နို့ကို ခြစ်ထုတ်ပြစ်မယ်။ ဒီဆေးလိမ်းကာစ ဘယ်လိုမှ မခံစားရပေမယ့် ၃-၄ နာရီ ကြာလာရင် နာလာပါမယ်။ ဆေးလိမ်း ပြီးရင် တစ်ရက်တိုင်တိုင် ပတ်တီးစည်းပေးထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ Cantharidin နဲ့ ရောထားတဲ့ ဆေးမျိုး ဆိုရင် ၂ နာရီကြာရင် ပတ်တီး ဖြည်ပေးရပါမယ်။
2. Liquid nitrogen ဆိုတာ ကြွက်နို့ကို အေးခဲသွားစေတဲ့ ဆေးကုနည်း Cryotherapy ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ ကြိမ်ကနေ ၄ ကြိမ် ရက်ခြားပြီး လုပ်ပေးရပါတယ်။ ၁ ပါတ်ကနေ ၃ ပါတ်ပဲ ကြာမှာပါ။
3. Electrosurgery and curettage လျှပ်စစ်နည်း။ ခြေထောက်မှာဖြစ်တာကို သုံးလေ့ရှိတယ်။ ပြီးတဲ့နောက် ခြစ်ပြစ်ပေးမယ်။
4. Excision ခွဲစိတ်ဓါးနဲ့ ခွဲထုတ်နည်း။
5. Laser လေဆာနည်းနဲ့ Chemical peels ဓါတုအခွံခွါနည်းတွေကို ခက်ခဲတဲ့ကြွက်နို့တွေအတွက် သုံးနိုင်တယ်။
6. Salicylic acid အပြင်းစား + Tretinoin + Glycolic acid တွေသုံးတယ်။ ခြေ-လက်တွေမှာ ပေါက်တာမျိုးကို လိမ်းပေးရင်ရပါတယ်။ နေ့တိုင်း ရက်ကြာကြာ လိမ်းရပါမယ်။ ရေချိုးပြီးနောက် အရေပြားက ခပ်စိုစိုလေး ရှိနေတုံး ဆေးလိမ်းတာ ပိုထိရောက်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ရေတစ်ခါ မချိုးခင် ကျောက်တုံးကြမ်းလေးနဲ့ ပွတ်တိုက်ပြီး သေနေတဲ့ အရေပြားလွှာကို ရှင်းထုတ် ပစ်ရပါဦးမယ်။
7. Bleomycin ဆေးထိုးနည်း။ ကင်ဆာကိုကုတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတော့ရှိမယ်။ ဥပမာ ခြေသည်း လက်သည်း ပျက်စီးနိုင်တယ်။
8. Immunotherapy ခုခံအားဆေးနည်း။ Diphencyprone (DCP) ဆေးသုံးတယ်။ Interferon (အင်တာဖရွန်) ထိုးဆေးလဲသုံးတယ်။
ကြွက်နို့ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ မသေပါ။ ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ တနေရာမှာ အသစ်ပေါ်မယ်။ ကြွက်နို့ကို တစ်နည်းနဲ့ မရရင် နောက်တစ်နည်းသုံးပြီး ကုရတတ်ပါတယ်။ အပြီးတိုင် ပျောက်သွားတာရှိသလို ပြန်လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လိင်လမ်းကြောင်းကြွက်နို့က ပိုပြီး ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သပ်သပ်ရေးထားပါတယ်။